Umhla My Pet » Wayehamba ngemoto kunye isilwanyana sakho
ukubuyekezwa: Jul. 08 2020 | 5 min ukufunda
Uyazi ukuba bafuna ukuhamba – ngoko kutheni ubasuse?
Qinisekisa nezilwanyana basempilweni, zicwangcisele utyelelo kunye ugqirha wakho, Uhlaziye naziphi badubule ukuba ngenxa. Ezinye Hotels ngoku ifuna ukuba ubonise ubungqina bokuba irekhodi umfanekiso isilwanyana sakho ngoku.
Qiniseka ukuba ndibanike ukuphathwa intakumba uze uphawule amayeza njengoko kwezinye iindawo ukuze ezihlaselwe iintakumba namakhalane. A unyango wamayeza heartworm kucetyiswa ukususela eza nengcongconi i-unokosulela isilwanyana sakho.
Khangela izinto zabo: (apakishe zonke iimpahla yakho pet kwingxowa enye encinane apho onokufumana kuyo)
Ngomnxeba kunye ikhola, igama pet tag (ngethemba ine inombolo yefowuni kuyo apho umntu ukuphendula, inani cell phone enkulu).
amanzi asebhotileni, kwakunye nesityana amanzi (kukhethwa uhlobo oko ayichitheki)
A unikezelo lokutya ngesilo, ngesitya mhlawumbi ngecephe, kwaye musa ukulibala ephatha
Ngebrashi pet, pet Ntokozo ukuba uza ndibuye ngeveki okanye ngaphezulu
A yokudlala okanye emibini, nento yokuba ukuba ala-.
Musa ukulibala izinto zabo zonyango:
nawaphi na amayeza
Mashiya ekususeni ngamatshungu
amathontsi zokucoca iliso
Isixhobo pet sizibambe (ezifana ibhanti lakho lokhuseleko kuphela izilwanyana)
Iingxowa zeplastiki ngenxa icholwa emva isilwanyana sakho.
Ukondla izilwanyana yakho isidlo ukukhanya iiyure eziliqela phambi kokuba emke uze uthabathe kubo ngumoya elide phambi kokuba uqalise uhambo lwakho.
Into yokuqala ukuqonda xa kusingethwe ukugula imoto kukuba 95% amatyala oko anxulumene uxinezeleko hayi eshukumayo ezinxulumene. isilwanyana sakho abalise uhambo imoto kunye sanihluthwayo kude nekhaya yayo yokuqala, okanye uhambo ukuya akube okanye babambekile nokuba, yenja. Ngoko ke, akumangalisi yayo ephalisa ezilandelayo emotweni kufuneka anconywe kwentlungu engqondweni ezilandelayo emzimbeni ngamandla kakhulu.
Ukuphinda-nkqubo sengqondo pet wakho esisingise umdla imoto. Fumana ipaki malunga 5-10 imizuzu ekhaya, mazibe omnye umntu emotweni kakhulu, dlalele inja kwaye kumphazamisa leli. Gcina kuye unoyolo yonke indlela eya epakini. Xa epakini zonke izinto ezonwabisayo ukuba inja uthanda, kuthatha ibhola, kwaye siwakhuphele Frisbee. akuyomfuneko isixhaso epakini ukuba ukuba elide…. kanye ludlamke kangangoko. Ke ukuqhuba ikhaya inja elimnandi kuye yonke indlela kwakhona xa ekhaya benza ingxolo nje kangangoko inja njengoko wenza epakini. Gqibezela iseshoni isidlo sakhe okanye nokuwunyanga ukuba imvume yexesha kunye neemeko.
Ke ngoku pet wakho uya kunxulumana ukuhamba ngemoto namaxesha fun.
Ezinika empty. Yinto Yingcamango elungileyo ukuba ukondla izilwanyana yakho iiyure ezintandathu ukuya kwezisibhozo phambi ukuqalisa uhambo endleleni. Ukuba ungatyanga iya kumenza okuba zikubiyele, yaye ukuba ngaba ugula, akukho ukutya emhlanzweni, ngoko ke kungcono ukuba kulula ukucoca. Ukunika amanzi pet, nokuba, akayi kuphazamise isisu sakhe kwaye kunokumenza akhululeke.
Okanye afakwe kwikota-itanki. Nangona ezinye izilwanyana ukuhamba kakuhle ungatyanga, abanye baya kuziva bekhululekile emva kokutya isidlo encinane. Ezinye izilwanyana kufuneka nje intwana yokutya esiswini yabo ukunceda ubagcine ekuguleni.
Phumlani kuphumla rhoqo. Nangona ezinye izilwanyana unokuhamba iiyure ngaphandle ngxaki, abanye siyaqala kwabanyusel emva iikhilomitha ezimbalwa. Mazi ipatheni isilwanyana sakho kwaye uyeke ubuncinane ngeyure nganye okanye ezimbini ndihambahamba ngokukhawuleza ukunceda isilwanyana sakho ukufumana kwakhe ilizwe-imilenze yangasemva. Yinto Kukwalicebo ukuba bamthulule intwana yamanzi, kuba akayi usenokuziva ukusela xa nguye emotweni.
Yiba up-ngaphambili kunye naye. Kukho na intshukumo kangangoko phambi imoto njengoko ngasemva, ngoko ukuze uncede nesilwanyana ukuba uyayivumela wamkhwelisa esihlalweni ngaphambili, kodwa qiniseka ukuba kwindawo ukunxitywa Doggy okanye yenja encinane isiqhoboshi wangena esihlalweni.
Ukwandisa imimango bakhe. izilwanyana, olunjengabantu, kunokwenzeka kancinane ukuba afumane carsick xa bajonge imbonakalo kudlula.
Oyile phantsi iifestile. nempepho kulungile nabani ngubani luloyiko carsick kancinane, kuquka inja okanye ikati, kodwa musa ukuvula ifestile ngokwaneleyo ngoko ke uya kusinda okanye ukufumana intloko indlela yakhe.
Zama umxube isindululo. Dimenhydrinate (Dramamine) — abantu ziyobisi ukuze uzikhusele ukugula imoto — kusebenzela izilwanyana. Eliphakathi ukuya izinja ezinkulu kufuneka banikwe 25 ukuze 50 neemiligram Dramamine ubuncinane iyure phambi abahambahambayo, iikati nezinja ezincinane kufuneka baqhube 12.5 milligrams. Qiniseka ukukhangela kunye ugqirha wakho phambi kokuba isilwanyana sakho nayiphi na imveliso amayeza.
LUNGISA CAR YAKHO
ukudala indawo apho isilwanyana wakho ndikhwele kwaye ngokukhuselekileyo ubone le window, kwaye akwazi ukuchukunyiswa nguwe. Babelapho lengubo yakho ngeli xesha uqhuba nto eyona nto iyiyo. Baya kufuneka ufikelelo amanzi kwakunye.
Ingubo okanye ebhedini pet ethambileyo uza kuba mkhulu ukuze bazive ekhaya.
Musa ukulibala isixhobo sizibambe, akufuni kubo luphaphazela kubiwe ukuba kufuneka uyeke ngesiquphe.
Ukuba ikati wakho ohamba nawe wenze indawo inkunkuma kitty. Ngasemva esihlalweni ngaphambili isebenza kakuhle kwezinye iimoto. Okokuqala walala phantsi eplastikini (ibhegi yomonakalo uya kwenza).
UKUJIKELEZA ukuhla kuhola
Amathuba okuba pet wakho uya kulala alithoba ekhulwini kwixesha xa zinganikezelwanga kwabakhangela window okanye ukufumana izilwanyana kuwe.
Kufuneka uyeke yonke 2 ukuze 3 iiyure ukuba Fido kusolula imilenze yakhe.
UNGAZE nibayeke emotweni
iimoto Modern kweengxwabangxwaba umoya ekhaya yaye isilwanyana usele yedwa emotweni usemngciphekweni kungekho nto umoya ngokwaneleyo, okanye ukubandezeleka ebushushwini. Nangona lobushushu umoya kuphela 70 banezidanga imoto elangeni ungafumana shushu kakhulu.
Ngethemba ukhangele web site Pet Travel kunye ulihlawulele isilwanyana ehotele unobubele Motel online. Ukuba ehotele / Motel ibiza intlawulo pet ukuhlawula, musa ukuzama ukufihla nesilwanyana yakho, uya kuchitha ubusuku bonke kokukhathazeka lungafunyanwa.
Xa ufika ucele igumbi kumgangatho ophantsi kufutshane kwindawo apho ndihambahamba kunye Fido. Lentendelezo ziko na indawo unelungelo. Qiniseka ukuba athabathe emva isilwanyana sakho ukuze ehotele / Motel iya kuhlala pet friendly.
Inkoliso yokuhlala cela ukuba awufuni ukushiya pet yedwa egumbini ngenxa yazizathu ezaziwayo. Kusenokufuneka ukuba iyalele uthathe okanye inkonzo kwigumbi, okanye ukuba kuhle ngokwaneleyo ukuba isilwanyana sakho ukuba sisale emotweni kangangesiqingatha seyure okanye ukuze uthe waphuma waya isidlo uthabathe kubo kunye. Kusenokwenzeka ukuba bafumane pet yokutyela friendly, khangela ziindawo kunye neendawo zokuhlala ngaphandle ezifana iikhefu ecaleni.
Ukuba ufikile kuphumelela
Bonisa pet zakho ngeenxa kwikhaya labo elitsha, apho ukutya kwabo, amanzi, nesilili.
Ukuba isilwanyana sakho ikati, ubabonise indawo kitty webhokisi yenkunkuma. Fido kuya kufuneka wazi apho bekumele ukuba uhambe kwakunye.
Ngoku ukulungele ukuba axhamle iholide yakho kwinkampani nomhlobo wakho osenyongweni.